Shiinaha WPC sintra baco soosaarayaasha iyo alaabada | Gokai
Xaashida WPC Sintra Caaga, oo sidoo kale loogu magacdaray guddiga looxa alwaaxa, waa qeyb hal abuur leh oo ka mid ah guddiga xumbada PVC. Guddiga xumbo ee WPC waxaa lagu soo saaraa cusbada PVC iyo budada qoryaha oo isku qasan saamiga qaarkood, oo lagu daro waxyaabo gaar ah oo lagu daro qaaciido casri ah, xumbo iyo kuleyl heerkul sare leh ayaa ugu dambeyn la sameeyay.
Waraaqda WPC Sintra Caaga waxay leedahay dareenka alwaaxda, laakiin waa biyo-diid iyo dab-celis. Waa bedel wanaagsan oo ah alwaax, plywood, loox xiirashada iyo xitaa Dhexdhexaad Cufnaan Dhexdhexaad (MDF).
Faa'iidada Xaashida WPC Sintra Caaga
1.Muuqaalka iyo dareenka waxay lamid yihiin kan qoryaha dabiiciga ah. Waxay u baahan tahay dayactir iyo dayactir ka yar, maadaama aysan qaloocin / laabanin ama u kala jajabin qaybo yaryar sida dabiiciga ah
2.Waa mid aad ugu adkaysata qoyaanka iyo, sidaa darteed, qalab aad u adkeysi badan.
Waxay sidoo kale leedahay iska caabin ka mid ah dhuxusha iyo fangaska.
4.Iyadu si fudud uma xoqdo mana xumaan ama lumiso xubnaheeda.
5. Sababtoo ah waxay ka kooban tahay baco dib loo warshadeeyay iyo qashinka alwaaxa, waa wax waara oo cagaar ah.
6.Waxaa jira hagaajin ballaaran oo ciddiyaha, boolal, iyo dhejiyeyaasha markii loo adeegsado WPC marka loo eego qoryaha dabiiciga ah.
7.Waxaa sii kordheysa caan maadaama ay ka hortageyso jarista aan loo baahnayn waxaana lagu sameeyaa qashin si faa iido badan leh si loo abuuro agab dhisme oo horumarsan.
Awoodda siligga ee Yield Mpa
Elogation ee nasashada%
Vicat jilicsanaanta dhibic ° C
Ku dheji xoog leh N
Xoog Saamaynta Choppy KJ / m2
Codsiga Xaashida caaga WPC Sintra
Waraaqda WPC Sintra ee caaga ah waxaa loo isticmaalaa sagxadaha, sagxadaha dhaadheer, xadiidka, xayndaabka, qurxinta dhulka, daaqadaha, albaabada, xirashada bannaanka ama gudaha, samaynta albaabbada iyo daaqadaha, diyaarinta qaabab adag oo qaabaysan, isku darka alaabta guriga, iwm.
Hore: xaashida muraayadda loo yaqaan 'acrylic mirror' 4 × 8
Xiga: caaga PVC 5mm cawlan
Xaashida loo yaqaan 'acrylic plexiglass sheet'
xaashi caag ah